Global Voices teny Malagasy » Fanentanana Hanao Ady Anaty Akata Mitondra Hafanana Manerana ny Fanjakàna Mitambatra (UK), Karatra Ho an’ny Toerana Iray isaky ny Mandeha · Global Voices teny Malagasy » Print
Fanentanana Hanao Ady Anaty Akata Mitondra Hafanana Manerana ny Fanjakàna Mitambatra (UK), Karatra Ho an'ny Toerana Iray isaky ny Mandeha
Voadika ny 13 Desambra 2016 2:50 GMT 1	 · Mpanoratra Annalisa Merelli Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Andrefana, Angletera, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Ohatra iray amin'ireo sary hita any amin'ny Twitter ampiasàna ny tenifototra #thisisthoughtful (mampieritreritraity)
Aty amin'ny fiafaràn'ny taona, rehefa toa nanjaka be ny fankahalàna vahiny sy ny tsy fandeferana, dia tara-pahazavàna iray no mitosaka ao Londona, avy aminà tetikasa iray mamy, mampihetsi-po This is Thoughtful , vondrom-piarahamonina iray ahitàna ireo mpamorona izay miasa mikatsaka ny hitondra fiantraika miabo eo amin'ny resaka sosialy.
Izany indrindra no asa farany indrindra nataon'izy ireo, A Welcome Thought. Hafatra fiarahabàna tsotra no nozarain'izy ireo nanerana ny tanàna (Londona tany am-piandohàna, tamin'ny alàlan'ilay tetikasa izay vetivety dia niparitaka be lasa ho hetsika iraisampirenena) ho toy ny fomba iray hakàna ireo toerana natao ho an'ny daholobe, tsy ho sehatry ny resaka tsy mampifandray, tamin'ny fanamafisana ny faniriana hisian'ny fifanotronana sy ny marimaritra.
Toy izao no fiasany: na iza na iza liana dia afaka manao printy ireo lasitra fametrahana hafatra (hita ato ). Ny eo ivelan'ny karatra dia misy ny soratra hoe “Toerana Iray Ho An'ny” vita printy eo amboniny ary efajoro kely tsy misy na inona na inona mba hametrahan'ny olona ny hoe iza na inona no tian-dry zareo ho arahabaina ny fahatongavany. Ao anatiny dia toerana hanoratana hafatra iray ho an'ny olona izay mahita ilay karatra. Mpianatra, mpifaninana amim-pirahalahiana, fotoana tokana an-tany, ireo tsy manana hialofana… Hatreto, natao ho anà vondron'olona sy hevitra maro ireo karatra ho anà toerana iray.
Misy sarinà karatra ho anà toerana iray ihany koa mandondòna eny anaty media sosialy, miaraka amin'ny tenifototra #thisisthoughtful.
A WELCOME THOUGHT: This place is home to us all @thisisthoughtful campaign for tolerance, kindness + understanding #thisisthoughtful  pic.twitter.com/BTRNuLYDab 
ERITRERITRA FIARAHABANA: Ity toerana ity dia toerana natao ho antsika rehetra, fanentanana @thisisthoughtful hisian'ny fandeferana, hatsaram-panahy + fifankahazoana
Tiavo ity tetikasa ady anaty akatan'ny hatsaram-panahy ity. Napetrako ato anatin'ny vata fampangatsiahana eto amin'ny Japan Center ity iray ity
Tena mampieritreritra marina tokoa. Hatreto, anjatony maro ireo karatra no efa naely nanerana ny Fanjakana Mitambatra, Etazonia, Kanadà, Alemaina, Gresy ary Espaina, ary manantena ny tarika fa hanao printy azy ireny ny olona ary hanatevina laharana ilay ady anaty akatan'ny fiarahabàna, sy hampita ireo karatra hitan-dry zareo mba ho tonga amin'olona sy toerana maro araka izay tratra.
“Ilaintsika ny mandefa fampahatsiahivana ara-potoana hoe ity tany ity dia natao ho antsika rehetra, ary mba hananganana hoavy mendrika kokoa iarahantsika tsirairay avy dia mila tsapantsika ny hoe “mpirahalahy mian'ala”, hoy ny fanazavàn'i Daianna Karaian, mpanorina ny This is Thoughtful, tao anatin'ny imailaka nalefa ho an'ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/13/93408/
 hita ato: http://www.thisisthoughtful.com/wp-content/uploads/2016/11/Thoughtful_instructions_final.pdf
 November 25, 2016: https://twitter.com/lifeandmeuk/status/802127947398254592
 November 23, 2016: https://twitter.com/PRowson/status/801466662797115393
 November 23, 2016: https://twitter.com/cassiewerber/status/801530436673556480